Gaas oo si cajiib ah u siray shacabka PUNTLAND (Qorshaha banaan-baxyadii ka dhanka ahaa DF) |
Gaas oo si cajiib ah u siray shacabka PUNTLAND (Qorshaha banaan-baxyadii ka dhanka ahaa DF)
Shalay iyo dorraad waxaa magaalooyinka Garoowe iyo waqooyiga Gaalkacyo ka dhacay dibad-baxyo xambaarsanaa caadifad qabiil, oo dad carreysan ay kaga soo horjeedeen madaxweyne Xasan Sheekh, Jawaari iyo Nicholas Kay.
Dadkaas reer Puntland ah ayaa sida la sheegay diidanaa in maamulka Galmudug uu noqdo mid ka kooban Gal-Gaduud iyo Mudug, waxayna door bidi lahaayeen in la yiraahdo Galgaduud iyo Koonfurta Mudug. Doodooda ugu weyn ee Puntland ayaa ah inay sharci darro tahay in gobolka la wada sheegto maadaama ay qeyb ka mid ah ayada maamusho, taasi oo gar u muuqata, inta aad ka ogaaneyso in Puntland ayaduba wada sheegato Mudug, inkasta oo qeyb un ay ka maamusho.
Ma rabo inaan ku dheeraado dooad Mudug, waayo waa la wada dareemayaa in Puntland waxa ay rabto ay yihiin “Wax walba Aniga”, waxaanse rabaa inaan waxyar dadka uga iftiimiyo ujeeddada dhabta ahayd ee dibad-baxyada.
Banaanbaxa ayaa waxaa soo dhaqaajiyey maamulka Cabdi Weli Gaas, oo maraka laga soo tago arrinta Mudug lahaa qorshe kale, oo dad badan aysan ogeyn.
Cabdi Weli Gaas ayaa waxaa saarnaa dhowaanahan cadaadis xooggan oo gudaha Puntland ka haystay, kadib markii maamulkiisa ka kooban labada gobol iyo barka uu wajahay xaalad dhan kasta kasii xummaaneysay tan iyo markii xilka uu la wareegay.
Gaas ayaa waxaa ku kacay kacdoon qabyaaladeysan iyo mid Shabaab ay majaraha u heyso. Beelaha kale ee Puntland wax ka dega ayaa dareemaya in Gaas qabyaaladiiste isu beddelay wax walbana uu u gacan gelinayo beeshiisa Cumar Maaxmuud, oo xukunka aan arag tan iyo Cabdullaahi Yuusuf Axmed, AUN.
Beesha Ciise Maxamuud ee Faroole ayaa qoryaha qaadatay, ayada oo uu ugu dambeeyey General Muxuyadiin iyo ciidankii uu la goostay oo weli diidan inay hubka dhiggaan kuna hanjabaya dagaal xooggan. Beesha Cusmaan Maxamuud ayaa iyana maamulkaba u aragta mid dheel dheel ah, oo aan shaqeeneyn, waxayna iska wadataa howlaheeda. Taas waxaa kasii darran in dilalka qorsheysan ee Shabaabku ay fulinayaan iyo weerarada ay kusii kordhayaan Puntland. Boosaaso ayaa habeenkii waxaa socdaala maleeshiyada Al-Shabaab. Beesha Leelkase ee Mudugta ay Puntland ku qeyliso wax ka deggan ayaa sheegtay inay maamulka gobollada dhexe taageersan tahay, inkasta oo uu u diiday Cumar Cabdirashiid oo fulinaya danta beeshiisa. Khaatumo ayaa kala mid ah taageerada. Dhulkii ay Somaliland qabsatay ayaa weli Puntland ay soo ceshan la’dahay inkasta oo habeen iyo maalin ay hanjabaad afka un ah dhaafi la’ dahay.
Arrimahaas oo idil waxaa ka darran dhaqaalo xumo baahsan oo maamulka Gaas wajahayo. Lacag yar oo ay ka shaxaadi jireen dowladda federaalka ayaan la arag sanado. QM ayaa isaga baxday Garoowe kadib weerarkii al-Shabaab ay ku qaaday xarunteeda. Mushaharka ciidamada Puntland ayaan la bixin bilo, oo ciidan badan ay darteed u gadoodeen una dhigteen jidgooyooyin.
Maamul dhibaatooyinkaas oo idil ay haystaan inuu Mudug aan cidna usoo socon oo af un laga sheeganayo habeen iyo maalin ka daba qeyliyo waxay ku tuseysaa inaysan muhiimad ahayn ee wax kale ay jiraan. Xaqiiqda ayaa ah in Gaas uu dareenka shacabkiisa ka leexinayo arrimaha murugada leh ee Puntland ay iminka wajaheyso. Gaas oo og in qalbiyada reer Puntland ay caadifad qabiil ku qaan gaartay, ayaa ka faa’ideystay oo soo kiciyey dadkii rabay inay waxa calooshooda ku jira dibedda u saaraan. Iminka Puntland oo idil waxaa haya xamaasad ka dhan ah dowladda federaalka iyo qabaa’ilka Muqdisho leh, waxaana joogsaday ka hadalkii dhibaatooyinka gudaha ee maamulkaas dhulka la galay, sida Gaas uu rabay. Gaas waxa uu cayaaray siyaasad cajiib ah, laakiin inta yar ee wax fahmeysa koleyba waan la socdaan. Sheeko kale la imow mudane.
W/Q: Cabdi Axmed Jaamac